t-nasiib algorithms | ThatsLuck.com
Sida loo cabiro nasiibka
Cabbiraadda nasiibka si sax ah, ama halkii la isku deyi lahaa in la saadaaliyo nusqaamaha fursadda roulette muddo gaaban waa nadiif saafi ah, si kastaba ha noqotee markii tirada wareega ay kororto, mahadsanid tirakoobyada saadaashu waxay bilaabayaan inay noqdaan wax ka sii yaraanaya una sii dhowaanaya, marka la eego, farqiga u dhexeeya go'aamiso nasiibkeenna ama nasiib-darradeena ku sharraxaadda jaaniska roulette, dhab ahaantii waa la qiyaasi karaa.
Hab suura gal ah oo lagu cabiro daldaloolada ayaa ah midka horey loogu sharaxay ► qoraalkan, markaan kaaga waramo isku-dhafka caanka ah ee Marigny.
Si kastaba ha noqotee, isku-dheellitirka Marigny wuxuu leeyahay xaddidaadyo, maadaama ay ku saleysan tahay oo keliya fursadaha iska soo horjeedka iyo kuwa la israacin karo, yacni iyada oo aan la tixgelin joogitaanka eber, taas oo nasiib-darro noqonaysa qalad weyn oo qiimeyn ah.
Xaqiiqdii, haddii aan tixgelinno tusaale ahaan 40.000 oo wareeg ah oo ku saabsan roulette, sida laga soo xigtay Marigny waxaan yeelan doonnaa in nasiibkeenna ugu sarreeya (oo la mid ah 5 jeer xididka laba jibbaaran ee wareegyada la ciyaaray) uu noqon doono 1.000 unug oo guuleysta, laakiin waa wax laga xumaado in 40.000 dhigeeysa sidoo kale waxaan la kulmi doonaa 1.081 jeer eber, sidaa darteed sida aad ku arki karto sharad roulette on Red ama Black at xitaa mass (flat bet), gaareyso 38.000 / 40.000 wareeg, eber darteed xisaab ahaan macquul maaha in lagu guuleysto xitaa hal cutub!
Xaddidan, si kastaba ha noqotee, way ka sii ballaadhan tahay haddii aan tixgelinno khamaarista ku saabsan lambarka keliya, kiiskan dhab ahaantii annaga oo had iyo jeer ujeedo ah xitaa tiro (flat flat) waxaan ku noolaan karnaa xitaa in ka badan 200.000 wareeg!
Jilitaanka sawirka hore waxaa lagu helay barnaamijka 'bot software' Roulette Bias Sniper, sida aad u arki karto 215.000 oo wareeg ah oo la ciyaaray ka dib, weli waxaa jira 2 lambar oo ciyaaryahanka ka dhigi lahaa inuu ku guuleysto u dhiganta qiyaastii 30 nambar oo hal guul leh, sidaa darteed in ka badan 1.000 unug! Laakiin tani waa mowduuc aan si qoto dheer uga hadli doonno qoraal kale.
Hab kale oo lagu cabiro nusqaamaha, laakiin aad uga saxsan kii hore, waa ► T-qaybinta ardayga, taas oo aan isla markiiba ku sharixi doono.
Tiirka koowaad ee habkani waa halbeegga lagu cabiro goldaloolooyinka, loo yaqaan leexashada heerka (sqm)
Jaangooyada istaandarku waxay u dhigantaa xididka laba jibbaaran ee badeecada wadarta tirada dhacdooyinka (n) jeer jaanisyada wanaagsan (p) iyo itimaallada ka soo horjeeda (q)
tusaale ahaan haddii aan tixgelinno 1.369 wareegyada roulette ee aan haysanno
Tiirka labaad ee t ardayga è celcelis ahaan dhacdo (m), taas oo u dhiganta soosaarka tirada dhacdooyinka (n) iyo itimaalka wanaagsan.
mar labaad marka loo eego wareejinta 1.369 ee kor ku xusan, haddii aan tixgelinno lambar keliya, waxaan leenahay:
Labadan qiimahood, celcelis ahaan (m) iyo celcelis weecasho laba jibbaaran (sqm), waa qiime tirakoob buuxa, maxaa yeelay waxay u oggolaanayaan kala duwanaansho kasta in lagu yareeyo isla halbeegga cabbirka, iyadoon loo eegin dhacdada ay ku dhacdo.
Dhimistaan ​​muhiimka ah waxaa lagu gaarayaa si hufan iyadoo ardayga, taas oo ah saamiga udhaxeeya leexashada (oo loo fahmay inay tahay farqiga u dhexeeya dhacdooyinka wanaagsan ee U iyo celceliska) iyo celceliska weecashada laba jibbaaran.
Waxaan haddaba leenahay taas:
Mar labaad marka la eego mala awaalka 1.369 ee tuurista kubbadda, haddii tusaale ahaan lambarka 13 uu soo baxo sagaal iyo toban jeer, waxaannu leenahay taas
Calaamadda + ama - waxay muujineysaa ku-xirnaansho la'aan ama hoos u dhac la'aan.
Isugeynta t ardayga sidaas darteed waa mid aad u faa'iido badan maxaa yeelay waxaa jira miisas tirakoob oo sidoo kale laga heli karo shabaqa, oo tilmaamaya si sax ah boqolkiiba suurtagalnimada in qiyamka qaarkood la dhaafay t.
Waxaa caadi ahaan loo arkaa in xadka ugu badan del t ardayga waa loo siman yahay 4, taasi waa xadka tirakoobka ee la isku raacay in suurtagalnimada ka badan tahay ficil ahaan ay tahay wax aan jirin.
Khaladaadka 2 ee Marigny
Cadeeyay waxa t ardayga iyo sida loo xisaabiyo, waxaan kuu sheegayaa isla markaaba in qaabkan cabbiraaddu uu si go, aan ah uga haboonyahay iskucelceliska Marigny, maxaa yeelay natiijooyinka ay soo saarto waxay sidoo kale tixgelin siineysaa cashuurta (eber).
Khaladka weyn ee Marigny wuxuu ahaa inuu ka fikiro mar haddii fursad ay gaarto farqiga 3 ama wixii ka sareeya, inay qasab tahay inay dib u gasho, sidaas darteed wuxuu soo jeediyay in la higsado dib u soo celinta isla markiiba farqiga.
Khaladka ugu horreeya ee Marigny ma uusan tixgelinaynin eberka, maxaa yeelay haddii ay run ahaantii run tahay in farqiga u baahan yahay in la soo celiyo, waxay si isku mid ah u run tahay in qofna uusan dhisi karin mudnaan intee le'eg oo istaroog ah oo farqigaani leeyahay.
Haddii fursad ay gaarto tusaale ahaan farqiga 4 (iskucelcelis aad u sarreeya oo Marigny ah maadaama ugu badnaan uu yahay 5), yaa noo xaqiijin kara in wejiga is-weydaarsiga u dhexeeya casaanka iyo madow ee soconaya xitaa boqolaalka wareega uusan bilaabi karin?
Ma xuma, qof ayaa ka fikiri doona, marxaladaha is-weydaarsiga ma guuleysan doontid laakin adiguna ma luminaysid ... laakiin maya, maxaa yeelay si kasta oo ay eber u soo baxdo sida uu filayo, horay ayay u sii xumaaneysaa dhammaan faa'iidooyinka aan ku guuleysan karno marka farqiga runti ku soo noqdo dhanka isku dheelitirka dabiiciga ah.
Khaladka labaad iyo kan ugu daran ee Marigny: tixgelinta wareegyada la soo ururiyey dhowr maalmood iyo laga soo qaatay roulette kala duwan oo ah hal waara (sidoo kale loo yaqaan "joogitaan shaqsiyeed").
Waxaan si xamaasad leh u tijaabiyey fikradan xiisaha leh ka dib dhowr milyan oo wareegyo jilitaan ah waxaan u imid gabagabada: ujeedooyinka kalsoonida tirakoobka ee la taaban karo, farqiga u dhexeeya roulette waa in si gaar ah loogu cabiraa taxane wareegyo ah oo loo qaadan karo isla matoorkii soo saaray. taxane aan kala go 'lahayn oo ah bilaabis.
Si kale haddii loo dhigo, haddii aan dooneyno falanqeyn ku saabsan 1.000 wareeg oo la isku halleyn karo, waa inaan diiwaangelinno 1.000 wareeg oo isdaba-joog ah isla roulette-ka oo aan ahayn tusaale ahaan 10 qaybood oo ka mid ah 100 wareeg oo laga soo qaatay maalmo kala duwan oo laga soo qaatay roulette kala duwan.
Had iyo jeer xusuusnow fikraddan mustaqbalka, maxaa yeelay waa mid aad muhiim u ah oo iska cad ma khuseeyo markaan raadineyno eexasho roulette, maxaa yeelay xaaladdan marka la isu geeyo dhammaan xogta wali waxay noqon doontaa mid muujineysa, runtii waxay xaqiijin doontaa joogitaanka cillad ama maya, laakiin tani sidoo kale waa mowduuc horey loogu soo koobay ► qoraal kale.
t-nasiib algorithms (aragti)
Hadda aan aragno fikradaha tirakoobka ee aan ku saleeyay barnaamijka cusub t-nasiib algorithms.
Aynu mar labaad falanqeyno jadwalka kor ku xusan:
Iyada oo ku saleysan xogta la soo sheegay, haddii tusaale ahaan casaanka uu gaaro qiime t ardayga u dhiganta 3,00 macnaheedu waa suuragalnimada in qiimahani gaaro 3,50 waa uun 0,02%!
Xaqiiqda, si kastaba ha noqotee, sidaas maahan, maxaa yeelay malaha su'aasha aan runtii isweydiineyno waa: mar haddii ay fursad soo gaarto t = 3,00 immisa jeer ayey ku timaaddaa t = 3,50? Weli ma aanan xaqiijin tan, laakiin waqti dheer ma qaadaneyso waxaanan qiyaasayaa in jadwalka kor ku xusan loo aqrin doono si sax ah sidan: tiro aan la cayimin oo laga soo rogay oo ah 1.000 wareeg kuwaa oo yeelan doona qiime t = 3,00 0,13% halka uusan jiri doonin wax tran ah oo ka weyn 4.
Si kastaba ha noqotee, anigoo raba inaan u tixgeliyo sida lagu kalsoonaan karo fikradda soo jeedinta ah ee ah in t = 2,50 ay ka badnaan karto t = 3,00 oo keliya 0,13% kiisaska, waxaan doonayay inaan dejiyo t-nasiib algorithms caqli gaar ah, macnaha ah in labada isku xigxiga Marigny iyo t ardayga, markay gaaraan qiyamka xad-dhaafka ah, waxay dhab ahaantii matalayaan isbeddel aad u xoog badan oo ah fursad la siiyay, taas oo sidii aan horay u soo aragnay, dib ugu laaban karto ka dib yaa garanaya inta boqollaal ee wareega, halka aan sii wadno inaan cashuurta ku bixinno miiska la soo saaray ilaa eber.
Si loo xaqiijiyo waxa ilaa hadda la soo sheegay, waxaan soo jeedinayaa labadan garaaf, aniga oo tixraacaya 1.000 wareeg oo la falanqeeyay labadaba marka la eego qiimaha t ardayga (garaafka koowaad) iyo isbeddelka farqiga fursadda Cas.
Sidaad u aragto, garaafka koowaad wuxuu xaqiijinayaa in marka qiimaha t = la gaaro -2,5 ka dib qiyaastii 200 oo wareeg ah (sidaa darteed waxaan joognaa joogitaan la'aanta casaanka, yacni madow ayaa soo baxay marar badan) qiimaha t ardayga wuxuu bilaabaa inuu kaco, isagoo tilmaamaya in fursada Casaanka ay si tartiib tartiib ah u bilaabaneyso inay isu dheelitirto inta jeer ee ay la egtahay fursada Madoow ee ka soo horjeedda.
Kordhinta, si kastaba ha noqotee, ma ahan mid lama filaan ah, laakiin waxaan aragnaa in dheelitirka (qiimaha t ardayga ku dhowaad eber) ficil ahaan wuxuu gaaraa 1.000 wareeg, markaa waxaan ciyaareynaa qiyaastii 800 oo wareejin taas oo aan ku bixineyno quruxda 800/37 = 22 eber iyo xaqiiqda sida aad ku arki karto shaxanka labaad sababo la xiriira eber lacagta maaliyadeed ee mala-awaalka ah ee ciyaaryahanka bilaabay sharad ka dib 200 wareejin (lacag caddaan / farqiga u dhexeeya -45 ee garaafka labaad), wuxuu xiraa 1.000 daahidyo iyadoo muggeed oo xabbadood lagu guuleystay, maxaa yeelay inta badan faa'iidooyinka laga helo xiritaanka farqiga waxaa lagu cunay eber.
Maxay noqon laheyd istiraatiijiyadda ugu wanaagsan ee ciyaaryahanka kiiskan? Waxay ahaan laheyd in lagu bilaabo ciyaarista t = -2,5 (at spin 204) oo la joojiyo isla marka xoogaa yar oo faa iido ah la helo (at spin 246) oo leh qiime t ardayga dib ugu soo laabtay -2,00 sidaasna ku guuleystay 3 qaybood oo faa'iido ah. Muuqataa wax yar? Ciyaaryahanka su'aasha laga qabo wuxuu ku guuleysan lahaa 3 qaybood oo ah 42 wareegyada, ama 7% Roi!
Laga soo bilaabo waxyaalahan oo dhan waxay ka yimaadaan annaga Xeerka koowaad: bilow sharad kaliya marka t ardayga wuxuu gaaraa qiimaha +/- 2,5 oo joogso isla marka macaashka la helo.
Tiirka labaad ee t-nasiib algorithms waa in la raadiyo qiimaha this ee t ardayga 2,5 ma ahan fursadaha galaya farqiga adag sida garaafka kore ee tilmaamaya Guduudka, laakiin waa fursadaha taas beddelkeeda leh isbeddel deggan, oo ka jilicsan kuwa kale iyo inaan ku beddelay ereyga Isbeddellada Dhexe.
Laakiin haddii fursadahaasi aysan lahayn farqi weyn, sidee ayey ku gaarayaan qiimaha t ardayga 2,5?
Waa tan tusaalaha waxa aan ula jeedo isla markaaba Isbeddellada Dhexe.
Labada garaaf ee kore marwalba waxay tixraacaan Fursadda Cas, markan waxaa loogu ekeysiiyay 100 wareeg.
Haddii aad eegto garaafka koowaad waxaad ogaan doontaa in qiimahaas t ardayga ku filan xasilloon, taasi waa inta udhaxeysa +1 iyo -1,5 ficil ahaan, garaafka koowaad qiimahan wuxuu si cad uga bilaabmay 0, ka dibna wuxuu u kacay +1, ka dib wuxuu ku dhacay -1,5 ugu dambeyntiina wuxuu ku laabtay +1.
Illaa iyo hadda wax la yaab leh ma ahan, laakiin haddii aan xisaabinno qiimaha t ardayga sida laga soo xigtay qiimaha ugu yar iyo kan ugu sarreeya aan gaarnay waxaan heleynaa tan iyo +1 (max) waxay u dhacday -1,5 (min), marka mid baa jiray leexasho u dhexeeya qiimaha ugu yar iyo kan ugu sarreeya ee + 1 / -1,5 ama 2,5 dhibcood!
Halkaan waxaan ka helnay qiimaha tixraacayaga 2,5 sidaa darteedna markay kudhowaan wareegga 20 ee garaafka farqiga udhaxeeya 2,5 ayaa la abuuray waxaana bilaabi doonnaa inaan diirada saarno Guduud (maxaa yeelay -1,5 waxaan ku jirnaa xaalad hypofrequency) halkan waa halka qaddarku ( iyo tirakoob) ayaa abaalmarin na siinaya, dhab ahaantii ilaa aan ka ciyaarno t ardayga = +1 waxaan ku guuleysan lahayn 15 cutub oo ka yar 80 wareeg!
Sida iska cad ku saleysan qaanuunka 1aad ee kore waan joojin laheyn macaashka ugu horeeya kadib, si kastaba ha noqotee tusaalahan waxaan rajeynayaa inaan cadeeyo fikirka Trend Dhexe iyo sida loo tiriyo t ardayga iyada oo lagu saleynayo farqiga u dhexeeya qiimaha ugu yar iyo kan ugu sarreeya ee la soo dersay.
Dhammaantood way cad yihiin illaa hadda? Ok, ha ka welwelin, barnaamijku wuxuu sameyn doonaa dhammaan xisaabiyadan t-nasiib algorithms, Ciyaaryahanku wuxuu kaliya ku qasbanaan doonaa inuu soo galo lambarrada markay soo baxayaan oo ay suuragal tahay inuu si gaar ah u sharaddo xitaa tiro (flat flat) marka ay soo tebinayso Software-ka.
Ka dib markaad dhaqaajiso t-nasiib algorithms lambarka aad horey u taqaanay sida loo helo, kaliya fur miiska ciyaarta oo bilow inaad gasho lambarada horey loo sii daayay, si aad sidaas u sameyso kaliya guji mid ka mid ah badhannada ku yaal sadarka dhexe ee lambarkiisu yahay 0 ilaa 36.
Markaad gujiso lambar, waxay sidoo kale u muuqataa sanduuqa ku yaal dhinaca bidix ee hoose (Dambe) ahaan xusuusinta tixraaceena.
Ka taxaddar markaad diiwaangelinayso lambarrada, maxaa yeelay haddii aad lambar khaldan gasho ma jirto qaab lagu saxo oo waa inaad gujisaa astaanta ThatsLuck dhinaca midig ee hoose, oo asal ahaan dib u dajiya fadhiga ka dibna waxaad u baahan doontaa inaad dib u bilowdo mar labaad.
Ficil ahaan ma jiraan wax kale oo la sameeyo, marka mid ka mid ah fursadaha in lala socdo oo, sida aad arki doonto, ay yihiin:
Ow Hoose / Sare
wuxuu soo saaraa farqiga t-qiimaha ardayga ee 2,5 isla markiiba t-nasiib algorithms digniin ayaa la hawlgaliyay iyada oo muujineysa fursadda la higsanayo!
Sida aad ku arki karto sawirka kore, xaaladdan waxaa calaamad u ah inaad isku daydo inaad ku sharraxdo lixda koowaad (SES 1), taas oo sida aad ku arki karto labada tiir ee midigta (taas oo mataleysa Joogtaynta sortie ee fursadaha kala duwan), ma aha sestina-yada ugu badan (oo ah SES 2), ama midka ugu yar ee soo noqnoqda (SES 3 iyo SES 6 weligood lama siidayn).
Haddii ay dhacdo in lambar u dhexeeya 1 iyo 6 ay soo baxaan, qiimaha ardayga t ayaa hoos u dhici doonta ka hooseysa 2,5 ka dibna digniinta ayaa baabi'i doonta, si cad illaa iyo inta ay jirto digniin aanad sharad gelin oo si fudud u diiwaan geliso lambarrada guuleysta sida ay siideyn taariikheed.
Sida iska cad waxay sidoo kale dhici doontaa inaad sharaddo fursado badan isla waqtigaas, kiiskan, waxaad isku dayi kartaa inaad sharadto xitaa dhowr cutub oo qiimo hoose ah oo ku saabsan tirooyinka ka dhexeeya fursadaha sharad, sidaan ku sameeyay sawirka hoose , Halka aan uga talaabay COL 1 SES 2 sidaa darteedna waxaan sidoo kale sharad ku dhigaa labada nambar guud iyo 7 iyo 10.
Waxaan rajeynayaa inaan sifiican oo faahfaahsan uga bixiyay mashruuca t-nasiib algorithms, talooyinkaygu waa iska fudud yihiin: waligaa ha kordhinin sharadkaaga oo bilow bilow ahaan inta unug ee aad ku guuleysan karto intaadan istaagin (Stopwin), qiime aan kugula talinayo inaad dejiso 10, ka dibna dabcan samee sidaad rabto, sida ugu muhiimsan ee had iyo jeer la haysto madadaalo kharashka bangiga!
Soo Degso Fayl	t-Algo.zip - 1 MB